अब विदेश जाँदै जान्न | विश्व विनोद
हास्यव्यङ्ग्य विश्व विनोद July 3, 2014, 3:09 pm
के छक्क परेर अक्क न पक्क हुनु भा’को हँ?म अब बिदेश नजाने नै भा’को हुँ, स्बदेशमै सबैथोक हुने भएपछि किन बिदेश जानुप¥यो र ? कुन देश बाँकि छ र घुम्नलाई ? पार्टिको काममा , देशको नाममा बिभिन्न ठाम् ठाम्मा घुम्न गएपछि मलाई बिदेश प्रतिको मृगतृष्णा ह्वात्तै घटेर गा’को छ । आखिर घुम्नु पर्ने देश नै कुन बाँकि छ र?
टन्न बैंकमा ब्यालेन्स छँदै छ, दो चार घडेरी शहरमा कमाएकै छु , एक दर्जन घर बिभिन्न शहरमा ठड्याएकै छु । अनि किन जानु प¥यो र बिदेश? हो म बिदेश जाँदै जान्न । जनयुद्दमा जनताका छोराछोरीलाईले पढ्न नपाए पनि मेरा छोरा छोरीले बिदेश गएर पढेकै छन् अनि किन जानु प¥यो बिदेश ? घरैमा बसेर अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुबिधा पाएकै छु अनि किन जानु बिदेश? सोझा जनता छन्, सोेझ पार्टि कार्यकर्ता छन्, सुधो गाईको जस्तो लुरुक्क भनेको मान्ने उनिहरु हुँदा हुँदै बिदेश जानु महापाप हो । हो म अब बिदेश जाँदै जान्न ।
सहायक प्राध्यापक , म.ब.क्याम्पस, बेसिशहर नगरपालिका ७, लमजुङ